Arsenal oo Ka Adkaatay Kooxda Stoke City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Arsenal oo Ka Adkaatay Kooxda Stoke City “SAWIRRO”
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium 3-0 uga badisay kooxda Stoke City.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa maanta ciyaarta ku soo bilaabay gool haye David Ospina,isagoo keydka galiyay gool haye Wojciech Szczesny oo la sheegay in lagu arkay musqusha asoo sigaar cabaya.
Ciyaarta ayaa waxaa daawanayay Thierry Henry iyo Robert Pires oo horey ugu ciyaar kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan Mathieu Debuchy oo daafaca bidix ka ciyaarta,ka dib markii ay isku dhaceen ciyaaryahan Marko Arnautovic oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Stoke City.
Ciyaaryahan Debuchy ayaa loo maleeynayaa in uu garabka ka kala siibtay,waxaana laga qaaday garoonka.
Ciyaaryahan Laurent Koscielny ayaa daqiiqadii lixaad ee ciyaarta goolka kooowaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta bedel ku soo galay ciyaarta,ka dib markii uu mudo sedax bilood ah dhaawac ku maqnaa.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 36-dhibcood,halka kooxda Stoke City ay ku jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Howlgallo dad lagu soo qab qabtay oo laga sameeyay magaalada Boosaaso
Roma iyo Lazio oo Bareejo Ku Kala Baxay Kulankii Rome derby iyo Kooxaha Inter,Sampdoria iyo Fiorentina oo Badiyay “SAWIRRO”